उपत्यकाका नाकामा थप क’डाई – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/उपत्यकाका नाकामा थप क’डाई
उपत्यकाका नाकामा थप क’डाई
काठमाडौँ – काठमाडौं उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको समय एक साताका लागि थपिएसँगै सुरक्षाकर्मीले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा थप क’डाई गरेको छ । उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बुधबार नि’षेधाज्ञाको समय एक साता थप गरी भदौ १७ गते सम्मका लागि निरनतरता दिने निर्णय गरेका छन् ।
यससँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा प्रहरीले चे’कजाँचलाई थप क’डाई गरेको छ । बुधबार दिउसो उपत्यकाका मुख्य नाकाहरु नागढुङ्गा र साँगा भन्ज्याङ नाकामा पुग्दा प्रहरीले चे’कजाँचलाई क’डाई गरेको पाइएको छ ।
नागढुङ्गा नाकाबाट खाद्यान्न, फलफूल, औषधी, तरकारी, दुग्ध र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई सहजै प्रवेश गर्न दिइएको छ ।त्यसबाहेक एम्बुलेन्स, निर्माण जन्य सामग्री बोेकेका सवारी साधनहरु पनि सोधपुछ गरी उपत्यका प्रवेश गर्न दिइएको देखिन्छ । त्यस्तै अत्यावस्यक कामका लागि आउनेहरुलाई पनि सोधपुछ गरी सम्पर्क विवरण टिपेर प्रवेश गर्न दिएको छ । सरकारले पनि अत्यावस्यक कामकाजका लागि आउनेहरुलाई न’रोक्ने बताउँदै आएको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने कुनैपनि पास वितरणको काम भएको छैन् ।
उपत्यका बाहिर जाने सवारी साधन भने खासै देखिएका छैनन् । यस्तै भक्तपुर तर्फको साँगा नाकामा पनि प्रहरीले क’डाई गरेको छ ।उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधन कम मात्रामा देखिन्छन् । यस नाकामा पनि प्रहरीले सवारी साधनमा आउने मानिसहरुको विवरण टिपेर पठाउने गरेको छ ।
समग्रमा उपत्यकाका सबै नाकामा सुरक्षाकर्मीहरुको उपस्थितिलाई बाक्लो बनाइएको छ । उपत्यका भित्र पनि अत्यावस्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रो’क लगाइएको छ । मुख्य सडकका चो’कचोकमा प्रहरीले चे’कजाँचलाई क’डाई गरेको छ । अत्यावस्यक सेवाका सवारी साधन भने परिचयपत्रका आधारमा सञ्चालनमा आउन पाएकाछन् ।
भोलिदेखि बजार बन्द गर्ने निर्णय, पसल तथा व्यवसाय संचालन गर्न नपाइने !
कोरोना दिनका दिन बढीराको छ , के फेरी लकडाउन गर्दा ठिक होला त् ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै जा’रि गर्यो यस्तो सुचना,भोलिबाट अब यस्तो हुने
यसकारण फेरि लकडाउनको चेतवानी